Hoggansi gaaffilee miseensota raayyaa ittisaa dhiyeenyan hin hordofin adda ni baafama- Ministeera Raayyaa Ittisaa – Fana Broadcasting Corporate
Hoggansi gaaffilee miseensota raayyaa ittisaa dhiyeenyan hin hordofin adda ni baafama- Ministeera Raayyaa Ittisaa
Finfinnee, Onkololeessa 2,2011(FBC)- Hoggansa miseensota raayyaa ittisaa reejmantii kutaa waraanaa 2ffaa Waajjira Muummee ministiraatti argamanii gaaffii isaanii dhiyeessanirratti hojiin qulqulleessuu kan hojjetamu ta’uu Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa Ityoophiyaa beeksise.
Hojiin qulqulleessuu kunis kan hojjetamu maalif dhiyeenyan gaaffii miseensota raayyaa ittisa biyyaa deebisuu fi qaama dhimmi ilaaluf dabarsuu dadhaban kan jedhudha.
Ministirri ministeerichaa obbo Mootummaa Maqaasaan miseensota reejmantichaa waliin mari’ataniiru.
Obbo Mootummaan gaaffin miseensota raayyaa ittisaa sirrii akka ta’e kaasanii, haalli gaaffii isaanii ittiin dhiyeeffatan garuu dogoggora akka ta’ee fi seeraa fi naamusa kan cabse ta’uu ibsaniiru.
Miseensonni raayyaa ittisichaa dirqama baatii tokkoo ega xumuraniin booda, Fulbaana 30,2011 muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad dubbisnaan kallattiidhan gara Waajjira Muummee Ministiraa imaluu isaanii kaasaniiru.
Maalif kallattiidhan gara Waajjira Muummee Ministiraa akka deeman, dhimmicha hoggansi olaanoo raayyaa ittisa biyyaa beekuu fi beekuu dhabuu, Waajjira Muummee Ministiraa osoo hin qaqqabin dura mariisisuun maalif akka hin danda’amin gaafatamaniiru.
Obbo Mootummaanis hoggansi sadarkaan jiru maalif gaaffii isaanii dafee akka hin deebisin, dhiyeenyan maalif akka hin hordofin hojii qulqulleessuu ni hojjenna jedhan.
Raayyan ittisaa naamusaa fi seera kan kabaju waan ta’eef rakkoo walfakkaatan ni mudataan hawaasni akka hin shakkines dhaamaniiru.
Waltajjiin Beeneshaangul Gumuuz fi Amaaraa dhimmoota nageenyaarratti waliigaltee…
Jilli MM Dr. Abiy daawwannaa misooma qonnaa Godina Arsii Aanaalee Heexosaa, Deegaluuf…
Jilli Muummee ministiraan durfamu sagantaa qulqullinaa marsaa 4ffaatin magaalaa…
jilli Muummee Ministiraan durfamu lafa qonnaa kilaastara qamadii godina Arsii aanaa…